Alamuu Gammachuu maaraatooni magaalaa Dabliinii injifate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Atleetiksii Alamuu Gammachuu maaraatooni magaalaa Dabliinii injifate
Alamuu Gammachuu maaraatooni magaalaa Dabliinii injifate
Tasfaanesh Danbii 3ffaa ta'uudhaan kan maaraatoonii dabliin xumurte
Alamuu Gammachuu maaraatoonii magaalaa Dabliin, Aayerlaand, itti geggeeffameen morkattoota isaa hunda irratti ol’aantummaa boonsaa argate. Alamuun maaraatoonii Dabliin sa’aa 2:14:01 xumuruudhaan abbaa meedaaliyaa worqee ta’uu isaa kan mirkaneeffate. Asaffaa Baqqalaa, ateetiin Itoophiyaa inni biraas, 3ffaa ta’uudhaan kan maaraatoonii Dabliin raawwate. Meedaaliyaan sadarkaa lammaaffaa harka atleetii Keeniyaatti kan kufe.
Maaraatoonii Dabliin kana irraa namoonni 15,000 qooda fudhachuun isaanii beekameera.
Woldorgommii maaraatoonii isa gama dubartootaan ammaoo kan milkaaye ateet Naataaliyaa Nehoonkoovaa, lammii Yukreen, turte. Naataaliyaan fiigicha kan raawwatte sa’aa 2:30:00’tti.
Wolmorkii dubartoota jiddutti taasifame kanaanis atleetonni keenya harka duwwaa hin hafne. Atleet Tasfaanesh Danbii 3ffa ta’uudhaan badhaasa meedaaliyaa argatteerti.
Previous articleItoophiyaan jaarraa addunyaan quufte keessatti maaliidhaaf beelofti?
Next articleAmaloonni namoota ciccimoo irraa calaqqisan maal fa’a?